I-Tronsmart ONYX PRIME, ukuhlaziywa nokusebenza | Izindaba zegajethi
URafa Rodríguez Ballesteros | 26/12/2021 14:00 | General, Izibuyekezo
Ingabe ufuna ama-headphone angenantambo? Njengoba kungenzeka ukuthi ubonile, lokhu akuwona umsebenzi olula, uma kubhekwa inani elikhulu lezinketho ezimakethe njengamanje. Ngakho-ke, ukukusiza emsebenzini wokuthola ekugcineni amahedfoni e-True Wireless owadingayo, namuhla siletha i-Actualidad Gadget inketho entsha, engaphezu kokuthakazelisa, i-Tronsmart ONYX PRIME.
Sikwazile ukuhlola lawa ma-headphone e-Tronsmart izinsuku ezimbalwa bese sizokutshela konke mayelana nolwazi lwethu lokusebenzisa, izici esingazithola kanye nentengo ongathola ngayo uma zikhethiwe.
2 Kanjalo ne-Tronsmart ONYX PRIME
3 Izici ezihlinzekwa yi-Tronsmart ONYX PRIME
Njengoba sihlala senza, sikukhombisa konke esingakuthola ngaphakathi kwebhokisi le-ONYX PRIME by Tronsmart. Njengoba cishe njalo, singasho futhi ukuthi asizange sikuthole okumangalisayo. Sinezethu i-headphones, the icala lokushaja, a inhlukano umsebenzisi kanye Ikhebula ye-UBS yohlobo C ukushaja ibhethri kukesi.
Thenga i I-Tronsmart ONYX PRIME ku-Amazon ngentengo engcono kakhulu
Kokunye, sithola futhi amasethi ambalwa wamaphadi ukulungiswa kwehedisethi, ukuze ibe nosayizi abathathu abahlukene, kanye naleyo enamathiselwe. Ngaphezu kwalokho, nathi sinakho amanye amabili "amandandatho erabha", yamasayizi ahlukene, asebenzela ukufeza ukulingana okungcono kwamahedisethi ngaphakathi kwendlebe.
Kanjalo ne-Tronsmart ONYX PRIME
I-Tronsmart ONYX PRIME ine ifomethi "endlebeni", kodwa banokuthile okukhethekile ekwakhiweni kwabo lapho abakhiqizi abambalwa benqume ukuhambisana nama-headphone abo. Njengamanye amamodeli amaningi, lawa mahedfoni e-Tronsmart ifaka amaphedi ezindlebeni okuyimpikiswano ezihlala ngaphakathi endlebeni futhi umsebenzi wazo uwukwenza i-vacuum effect. Kulokhu sithola osayizi abathathu abahlukene.
I-ONYX PRIME nayo inenye indandatho yerabha eyengeziwe esekupheleni kombhobho. Inikeza pukuze i-handset iqine kakhudlwana ezindlebeni zethu nokuthi ayikwazi ukunyakaza noma ukuwa. Okwengeziwe okuncane okubenza ba inketho enhle kakhulu uma ufuna ama-headphones azokuphelezela ngesikhathi sokusebenza komzimba ezemidlalo. Isesekeli ebesivele siyibonile kwamanye amamodeli nokuthi ngemuva kokuyizama singafakazela ukuthi bayawufeza umsebenzi wabo. Nathi sinakho osayizi abathathu abahlukene ukuze ukulingana kuphelele. Ingabe yilokhu obukufuna? Thola eyakho I-Tronsmart ONYX PRIME ku-Amazon ngokuthunyelwa kwamahhala.
Ama-headphone ane-a usayizi compactZincane esandleni futhi ikakhulukazi uma sizigqokile. Izinto zokwakha, ku ipulasitiki ecwebezelayo, kanye nesisindo esincane kakhulu enaso senza ukuthi singaboni ukuthi sizigqokile. Okuthile okubaluleke kakhulu kulabo abawasebenzisa amahora amaningi noma lapho bedlala imidlalo.
Engxenyeni engaphandle kwendlebe, ngaphezu nje kwelogo yenkampani, i izilawuli zokuthinta. Ngabo singakwazi lawula ukudlala komculo, yeqa amathrekhi uye phambili noma emuva, misa isikhashana noma qala ukudlala. Endaweni efanayo sithola a imakrofoni ezosetshenziswa ukulawula ukukhanselwa komsindo osebenzayo. Futhi phansi, sine-a ukukhanya okuholile lokho kusitshela uma uxhumano luyasebenza, noma ileveli yebhethri yehedisethi ngayinye.
El icala lokushaja, lapho ama-headphone aphumula khona ukushaja, abuye akhiwe ngepulasitiki emnyama, kulokhu ngokuqedwa kwe-matte. Ama-headphone angena kahle ngenxa ye-os izikhonkwane kazibuthe. Futhi bayanikela kufikela kuzindleko ezigcwele ezintathu ezengeziwe ukuze ukuzimela kwe I-ONYX PRIME iyakwazi ukuhambisana nathi. Manje usungathenga ku-Amazon the I-Tronsmart ONYX PRIME ngentengo enhle kakhulu
Izici ezihlinzekwa yi-Tronsmart ONYX PRIME
La ukuzimela Kungesinye sezici esingazicabangela njengezibaluleke kakhulu lapho sinquma ngemodeli eyodwa noma enye. Sinokukhiqizwa kabusha kwe umculo waqhubeka amahora afika kwayisishiyagalombili ngomthwalo ngamunye. Y isamba esingafika emahoreni angama-40 uma sinecala lokushaja.
La ukuxhumana ingelinye lamandla abo kwazise bahlome ngobuchwepheshe I-Bluetooth 5.2. Ukuxhumana okusheshayo nokungenamthungo ngaso sonke isikhathi. Futhi ngiyabonga I-Qualcomm 3040 chip, sithola ikhwalithi yomsindo ethuthukisiwe eyenza umuzwa wokulalela ube ngcono kakhulu.
Sinefayela le- ubuchwepheshe obuthuthukisiwe be-True Wireless Stereo Plus. Iyakwazi ukulawula ukuthi ukusetshenziswa kwama-headphones amabili kuyalingana. Futhi kuletha ukuthuthukiswa okuphawulekayo ekuzinzeni koxhumano. Futhi ngokubala ku- Ukukhanselwa komsindo okusebenzayo kune-chip ye-QCC3040 inikeza ulwazi lomsebenzisi owanelisa kakhulu.
La ikhwalithi yomsindo Banikeza ngaphezu kwalokho okulindelekile.
Ukuzimela kufika emahoreni angu-40 ngaphandle kwesidingo samapulaki.
Umklamo ephelele ezemidlalo.
Tamaño yekesi lokushaja nama-headphones ngaphezu kwesilinganiso.
La irabha yokulungisa Kungase kungakhululeki, nakuba kubalulekile ukuthi usayizi ulungile.
I-Tronsmart ONYX PRIME
Kuthunyelwe ku: December 26 we-2021
Ukulungiswa kokugcina: December 25 we-2021
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Tronsmart ONYX PRIME, ukuhlaziywa nokusebenza